Gini mere ndi eji eji aru nwanyi ara ahu bu ndi enyemaka? | Ngwọta OMG
Igwefoto ahụ bụ ihe ndekọ edere ka ọ ga-eyi uwe ndị uwe ojii, na-enye ndekọ ọdịyo nke ihe omume site na onye na-ahụ ya, na-egosipụta ọrụ ya.
Usoro HVAC nwere obere igwefoto agbakwunye na uwe uwe ojii ma ọ bụ ugogbe anya nke uwe ojii ma ọ bụ eyi dị ka okpu agha, nke na-edekọ ụda na onyonyo mgbe ndị uwe ojii na-ekwukọrịta na ọha na eze. Ihe ndekọ dijitalụ e dere ede na-edekọ ihe omume site na echiche onye ọrụ ya na arụmọrụ ọrụ ya.
Nnwale ndị ahụ chọpụtakwara njirimara CAC iji nyochaa nyocha nke ọma nke ụlọ ọrụ mmanye Iwu site na ikwugharị ihe ndị metụtara iji ike. Dabere na njirisi nyocha na paradaịs nke ihe nlegharị anya na-eme ugboro ugboro, ọ ga-ekwe omume ilekwasị anya na mgbanwe ndị akọwapụtara metụtara akụkụ niile nke iji ike anụ ahụ iji chọpụta ebe kachasị mma itinye igwefoto onye uwe ojii na-arụ ọrụ ya yana njirimara nke CVC ga-enwerịrị iji mezuo ihe achọrọ maka nchịkọta ihe akaebe.
Ọrụ ndị uwe ojii na-eji teknụzụ ọhụụ iji mee ka ndị uwe ojii na ndị ọha ha na ha na-emekọrịta maka mmeghachi omume ọ bụla. CVC na-eme ka a mata ihe ga-edo anya ma doo anya maka ihe niile metụtara ndị mmadụ ma na-enye nkọwa doro anya banyere ihe ndị uwe ojii na-ezute mgbe oke ọnọdụ siri ike. Ihe oru di ka nke a nwere ike itule ma chọpụta uru mgbakwunye nke ngwaọrụ uwe ojii ọhụrụ. Dịka ndị uwe ojii nke oge a, ndị ọrụ mmanye iwu na-eme nyocha ma na-enyocha teknụzụ ọhụrụ iji mezuo ikike ha nwere ichebe ndị nkịtị. Ebumnuche nke usoro a ka bụrụ otu - iji nye ndị otu na - ahụ maka mmanye iwu ngwaọrụ ha chọrọ iji merie ihe ịma aka ndị metụtara ugbu a na gburugburu ebe obibi na - agbanwe agbanwe.
Citizensmụ amaala nwere ike ịrịọ ka ha hụ ozi nkeonwe ha. Arịrịọ maka ịbanye na ndekọ CAC emere n'okpuru Nnweta Nweta Ozi na Nzuzo Enwere ike itinye akwụkwọ ibe weebụ ATIP.
A ga-agwa ọha mmadụ iji CACs, ọkachasị ebe a na-ebugharị igwefoto, yana n'ime ndị na - ahụ maka ndị mmanye iwu iji mee ka ha mata amụma na omume kachasị mma na nke a.
A na-eji CAC mee mkpokọta ihe akaebe maka nyocha ndị omempụ na iji mezuo ụlọ ọrụ mmanye iwu na-eme nkwa ịmebe mmekọrịta site na ịkwalite ụlọ obibi na obodo ndị dị nchebe n'ofe obodo ahụ. Ojiji CAC ga-akwadokwa ikike nke ndị mmanye iwu nke Mịnịstrị igbochi mpụ, nyochaa mmejọ, dobe udo na usoro, ịkwado iwu, ma nye onyinye na nchekwa mba. , iji hụ na nchekwa nke ndị ọrụ gọọmentị, ịgakwuru ndị isi, yana ndị otu ndị si mba ọzọ, na iji nye nkwado ndị ọrụ mmanye iwu ndị ọzọ. Mgbe gị na ndị mmadụ na-emekọrịta ihe, ndị otu ga-eji CAC mee ihe na ha, dabere na ụkpụrụ mmekọrịta ọha na eze. Ndị ọrụ mmanye iwu ahụ na-agba mbọ ichedo ozi nkeonwe anakọtara ma na-atụle iwu na usoro ya niile iji hụ na ha na-erube isi n'iwu gọọmentị.
Gini mere ndi eji eji aru nwanyi ara ahu bu ndi enyemaka? gbanwere ikpeazụ: December 2nd, 2019 by admin
Nzuzo 2729 26 Echiche Taa